Soo dejisan Mobogenie 3.1.18.1 – Android – Vessoft
Mobogenie – software shaqaynaysa si ay u maareeyaan waxyaalaha ay ka kooban qalab iyo dagsado ka adeega Mobogenie. Software The kuu ogolaanayaa inaad si aad u eegto iyo muusikada, ciyaaraha iyo codsiyada, boostada a comment, qiimeeyaan codsiyada iyo la shaqeeyaan Bookmarks. Mobogenie kala qaybinaya codsi ay caan iyo qaybaha in aad buu u fududayn kara raadinta adeegga. Software waxaa ka mid ah Tababaraha file kaas oo awood u aragto files warbaahinta, habka scan iyo kormeer ku updates oo ka mid ah codsiyada lagu rakibay ah. Mobogenie kale oo ku jira qalab ka waafajinta la your computer iyo qabtaan gurmad ah nidaamka.
Noocyada badan ee codsiyada
Haboon search adeegga
.Wadashaqayntaas La computer
Soo dejisan Mobogenie
Faallo ku saabsan Mobogenie
Mobogenie Xirfadaha la xiriira
9Apps – adeeg codsi caan ah oo leh noocyo kala duwan oo noocyo kala duwan ah oo laga heli karo kala soo bax iyo cusbooneysiin toos ah noocyadii ugu dambeeyay.
Mova – softiweer si loo horumariyo aqoonta luqada Yukreeniyaan. Softiweerku wuxuu ka kooban yahay qawaaniin badan oo kooban iyo maktabad ballaaran oo jimicsi xiise leh leh oo sharraxaad leh.
Ku haboon codsiga shirkadda waalka si ay ula socdaan сloseouts ciyaarta. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad la socotid waxa kulan aad saaxiibo yihiin ciyaaro iyo hadli iyaga la qolalka chat.
Software navigation oo u shaqeeya mabda’a network bulshada si ay ula socdaan wadada dhacdooyinka kala duwan ee waqtiga dhabta ah.